I-China WIK 6800 yokuZilayisha ngokwakho abaXubeki beekhonkrithi abavelisi kunye noMthengisi | UWilk
WIK I-6800 yokuZilayisha iiKhonkrithi eziXutywayo
Umzekelo. WIK6800 (Vumelanisa). Asi 10T ivili elisezantsi deceleration kabini waqhekeza ibhulorho
Imodeli yenjini Amandla eYuchai 4108 ITire. 1670R22.5 Ucingo oluphezulu uxinzelelo umqolo kabini
Amandla alinganisiweyo 91kw Imoto. I-Oko axial plunger yemoto
Ifom yokuqhuba Isiguquli setorque yotywala (inqanaba lesantya esiguqukayo).) Indlela ahanjiswa ngayo amanzi Ngesanti kubunzulu baphantsi lwangaphandle / / ixesha edluliselwe
Ibhokisi yemiyalezo. Ukudluliselwa kokuhamba kwe-ZL-280 Ifom yefom I-7600 x 2950 x 3400mm
Izixhobo 4 ukuya ku-4 ubuyela kwisantya esiphindwe kabini nesisezantsi Umgangatho wokulungiselela 9000kg
I-WIK Self Loading Abaxube beKhonkrithi banamalungelo obunini obuchwephesha obunzulu bokuvelisa imveliso ezenzekelayo yekhonkrithi. Ukusukela ngoko, akusekho nzima ukuvelisa kunye nokuhambisa ikhonkrithi. Abantu ababini banokufikelela kwimveliso yee-cubic metres ezili-140 ngosuku.
WIK Self Loading eziphathekayo Umxhubi ngokupheleleyo oluzenzekelayo Umxhubi iinkuphelostencils kungoku nje eziphambili umxhubi iinkuphelostencils. Ifuna kuphela abasebenzi ababini ukuba basebenzise isithuthi, omnye unoxanduva lokuqhuba isithuthi kwaye omnye unoxanduva lokondla uncedo. Injini yayo inokusetyenziswa kwiindawo ezininzi ekusebenzeni kwesiqhelo, itanki yokuxuba inokujikeleza iidigri ezingama-270 ngokuthe tye kwaye inokukhutshwa nakweyiphi na indawo yomzimba wemoto. Ngaba kusindisa kakhulu abasebenzi kwaye kulula ukuvelisa ikhonkrithi?
Eyona nto ibaluleke kakhulu kulwakhiwo lwezakhiwo eziphezulu yikhonkrithi. Isixhobo endifuna ukusazisa namhlanje yitraki yomxube wekhonkrithi. Idibanisa imisebenzi emininzi kwaye inokutshintsha iiseti zomvelisi, izinto zokufaka, abaxube, iitanki, kunye nangaphezulu kwabasebenzi aba-6. Umzimba uza nezikali ezichanekileyo ze-elektroniki, iinkqubo zokufaka inaliti yamanzi kunye neetanki zamanzi ezinobungakanani obukhulu. Le moto inokuvelisa ukuya kuma-200 ngosuku. Ikhonkrithi yeCubic
Itrakhi yokuxuba ikhonkrithi yamva nje yasekhaya enomxholo omtsha woyilo. Inokuvelisa ii-cubic metres ezingama-20 ngekhonkrithi kwiyure enye. Ukuba ngumxube wekhonkrithi kulingana nokuba nomlayishi, umxube, kunye nomthuthi onokuzilayisha ngokuzenzekelayo, axube, kwaye athule. Abasebenzi ababini banokusebenzisa isikali esichanekileyo se-elektroniki ukulungiselela izinto eziphathekayo. Xa kuthelekiswa nomgangatho wenani, itanki yamanzi enomthamo omkhulu iqinisekisa ukuzaliswa kwamanzi ngokuzenzekelayo. Ingeniso yeyure iphezulu njengamawaka ee-yuan, kwaye ipleyiti yelayisensi inokusetyenziselwa ukuqhuba ngesiqhelo.
Umatshini omtsha wokuxuba ikhonkrithi unokuvelisa ii-cubic metres ezi-4 zekhonkrithi kwimizuzu eli-12. Ukuba neloli yokuxuba ikhonkrithi kulingana nokuba nomlayishi, umxube, itraka yezothutho kunye nabasebenzi abangaphezulu kweshumi elinambini. Inokulayisha ngokuzenzekelayo, idibanise, kwaye uyothule umthwalo. . Izikali ezichanekileyo zombane zilawula umgangatho wezinto eziphathekayo zekhonkrithi. Inkqubo yenaliti yamanzi ezenzekelayo kunye netanki elikhulu elinamanzi amakhulu lenza iimeko ezifanelekileyo zokuxuba ikhonkrithi.
Oomatshini bokuxuba beKhonkrithi bamva nje bavula ixesha elitsha lemveliso yekhonkrithi. Ukutya okuzenzekelayo, ukugcwaliswa kwamanzi ngokuzenzekelayo, ukuxubana okuzenzekelayo kunye nokwehlisa ngokuzenzekelayo kunokuphucula imeko yothuli kwindawo yokwakha. Uyilo lwenkqubo yasebantwini, inkqubo elula nefanelekileyo yokusebenza, isikali esichanekileyo se-elektroniki kunye netanki elikhulu lamanzi, sisiqinisekiso esihle sokudibana kwekhonkrithi. Inokuvelisa ii-cubic metres ezingama-20 zekhonkrithi ngeyure enye, enoqoqosho, esebenzayo nefanelekileyo.
Egqithileyo I-WIK 5500 yokuZilayisha iiKhonkrithi eziXutywayo
Okulandelayo: WIK28F Ivili lokulayisha
I-WIK 2500 yokuZilayisha iiKhonkrithi eziXutywayo
4 iitoni zonke-in-nye 4X4 forklift